Xaaladda Coronavirus ee Somaliland ee Maanta – WARSOOR
Xaaladda Coronavirus ee Somaliland ee Maanta
Hargeysa – (warsoor) – Warbixinta maalinlaha ee ay soo saarto wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Somaliland ayaa maanta shaaciyey dad cusub oo laga helay xanuunka covid19.
Tiradda maanta laga helay ayaa dhan 8 qof. Dadkan ayaa kala jooga 5 qof Berbera, 2 qof Burco iyo 1 qof Hargeysa. Dhamaan 8-da qof ayaa ah rag. Waxaa maanta u dhintay xanuunkan 1 qof.
Guud ahaan dadka xanuunka qaba ayaa tiradoodu dhan tahay 129 qof, xanuunka guud ahaan waxaa u dhintay 10 qof. Xanuunkan tan iyo intii baadhitaankiisa la bilaabay waxaa la baadhay 701 qof.
Jidka ugu dhow ee Somaliland lagu aqoonsanayo iyo sharciyada Somalia oo muran ku jirta
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ee UCID oo Ka Hadlay Wadda Hadalada Somaliland iyo Soomaaliyo